कसरी जान्ने यदि तपाईंले इन्स्टाग्राममा सन्देश पढ्नुभएको छ 🥇
कसरी थाहा पाउने यदि उनीहरूले इन्स्टाग्राममा सन्देश पढेका छन्
सञ्चार एक समारोह र मानवताको जन्मजात आवश्यकता हो। सामाजिक नेटवर्कको प्रगतिको साथ, धेरै प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको अनुयायी बनेका छन्। द्वारा यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने क्षमतालाई धन्यवाद साइबर माध्यम इन्स्टाग्राम एक प्लेटफर्म हो जुन 600०० मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूलाई सञ्चारका लागि अनुमति दिएको छ। यस कारणका लागि, यो समकालीन विश्वको सबैभन्दा प्रशंसित हो। एउटा सब भन्दा पछिल्लो प्लेटफर्म उपकरणहरू जान्नु जस्तै हो जुन तपाईंले इन्स्टाग्राममा सन्देश पढ्नु भएको छ।
इन्स्टाग्राम एक हो प्रसिद्ध सामाजिक नेटवर्क, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई छविहरू मार्फत संवाद गर्न अनुमति दिएको छ। यो हुन्छ, किनकि प्लेटफर्मको पोष्टले एक फोटो, छवि वा भिडियो बोक्नु पर्छ। र यीमा यस समयमा के भइरहेको छ भन्ने विवरण थपिएको छ। यसका साथै सामाजिक नेटवर्कले केहि बर्षमा प्रत्यक्ष सन्देशहरू पठाउन विकल्प ल्याएको छ। यो जस्तै को लागी संचार लाई बढावा दिनुहोस् नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरू बीच। इन्स्टाग्राममा स्वचालित मनपर्दो प्राप्त गर्नुहोस्.
प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम सन्देशहरू अनुप्रयोगको लागि क्रान्तिकारी भएका छन्। यी निरन्तर क्रमविकास मा भएको छ अनुभव सुधार गर्नुहोस् प्रयोगकर्ताको। को Instagram सिधा तिनीहरू व्यक्तिलाई विचारहरू र लिखित सन्देशहरू अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ। यस तरिकाले तपाईं सन्देशमा संलग्न फोटो र भिडियोहरू थप्न सक्नुहुनेछ। र हालसालै कथाहरू पठाउँदै प्रत्यक्ष सन्देश द्वारा।
प्रत्यक्ष सन्देश पठाउन, प्रयोगकर्ताले केवल आफ्नो मेलबक्स प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र सिर्जना गर्नुहोस् चयन गर्नुहोस् नयाँ सन्देश पछि, तपाईले प्रयोगकर्ता छान्नु पर्छ जसलाई तपाई सिधा सन्देश पठाउन चाहानुहुन्छ र यसरी लेख्न सुरु गर्नुहोस्। एक पटक सन्देश पठाइएको छ र प्रयोगकर्ताले यसलाई पढिसके पछि, अनुप्रयोगले संकेत गर्दछ सन्देश स्थिति त्यो हो, यसको साथ प्रयोगकर्ताले थाहा पाउनु पर्छ कि उनीहरूले इन्स्टाग्राममा सन्देश पढेका छन् कि छैनन्।
कसरी थाहा पाउने यदि उनीहरूले इन्स्टाग्राममा सन्देश पढेका छन् भने?
त्यहाँ धेरै इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू हुन् जसले सन्देश पठाउँदा जान्न चाहन्छन् प्रदर्शित थियो प्राप्तकर्ता द्वारा को अनुप्रयोग इन्स्टाग्राम, एक पढ्ने सूचना ल्याएको छ। कसरी जान्ने यदि उनीहरूले इन्स्टाग्राममा सन्देश पढेका छन् भने, धेरै साधारण तरीकाले गर्न सकिन्छ। यो गर्नका लागि तपाई प्रयोगकर्ता हुनुपर्दछ पछ्याउनुहोस् una चरणहरूको श्रृंखला कुनै जटिल छैन।
अनुप्रयोगमा लगईन गर्नुहोस्
यसको लागि प्रयोगकर्ताले आवाश्यक हुन्छ पहिचान गर्नुहोस् प्लेटफर्ममा। यो तपाईंको इन्स्टाग्रामसँग सम्बन्धित ईमेल वा अनुप्रयोगमा तपाईंको प्रयोगकर्ता नामको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। साथै, तपाईंले अनुरोध गरिएको बक्समा तपाईंको हालको पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। एकचोटि अनुप्रयोग प्रविष्ट गरियो जारी गर्नै पर्छ जान्न को लागी तिनीहरूले इन्स्टाग्राम मा एक सन्देश पढेका छन्।
ट्रे वा मेलबक्स
अनुप्रयोग प्रविष्ट गरेपछि, प्रयोगकर्ताले प्रविष्ट गर्नुपर्दछ सन्देश बक्स। यसमा एकचोटि, तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ सबै सन्देशहरू बनाइएको वा प्राप्त। यदि सन्देश हेरिएको छ कि छैन जाँच गर्न, प्रयोगकर्ताले पहिले नै ट्रे मा रहेका कुनै पनि सन्देशहरू पहुँच गर्न सक्दछन्।
प्रयोगकर्ताले खोल्नु पर्छ कुनै कुराकानी पहिले नै अवस्थित छ जहाँ अन्तिम सन्देश यो द्वारा पठाईएको थियो। यी जो कोहीको लागि हुन सक्छन् र कुनै पनि मितिमा बनेको छ। यस्तो तरिकाले कि यदि प्रयोगकर्ताले केहि वर्ष पहिले प्रत्यक्ष सन्देश च्याट चयन गर्‍यो भने, उसले यो पनि थाहा पाउन सक्नेछ कि प्रापक तपाईंले इन्स्टाग्राम सन्देश हेर्नुभयो।
जब तपाईं पहिले नै इच्छित कुराकानी खोल्नुभएको छ, प्रयोगकर्ताले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि अन्तिम सन्देश भएको थियो उहाँद्वारा पठाइएको। यसैले सन्देशको तल मात्र, एक आँखा आकारको आइकन हुन सक्छ वा हुन सक्दैन। यो सन्देशको स्थितिमा निर्भर हुनेछ। केसहरूमा जहाँ सन्देश प्रदर्शित भयो, प्रतिमा सन्देश अन्तर्गत आइकन फेला पर्‍यो। नपढिएको सन्देश जस्तो छैन स्वामित्व हुनेछैन आखा-आकारको आइकन।
इन्स्टाग्राममा सन्देश पढिएको छ भनेर देखाउनबाट कसरी बच्ने?
त्यस्तै, धेरै प्रयोगकर्ताहरू जान्न चाहन्छन् यदि तिनीहरूले इन्स्टाग्राममा सन्देश पढेका छन् भने। त्यहाँ धेरै छन् जो यस प्रमाणलाई छोड्न चाहँदैनन्। यस तरिकाले, तिनीहरूले गर्न सक्छन् जोगिन प्रेषकलाई थाहा दिनुहोस् यदि उनीहरूले इन्स्टाग्राममा सन्देश पढेका छन् भने।
सक्षम हुन स्थिति लुकाउनुहोस् सन्देश प्रदर्शन, पहिलो चीज चाहिन्छ सन्देश प्राप्त गर्नु हो। प्राप्तकर्ता जस्तोसुकै भए पनि, प्रयोगकर्ताले लुकाउन सक्दछ कि उसले सन्देश पढेको छ। यो को लागी हुन सक्छ विभिन्न कारणहरू, जस्तै एक विशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न को लागी दबाब बेवास्ता।
सन्देश प्रदर्शन गर्नु अघि, प्रयोगकर्ताले मोबाइल उपकरण राख्नु पर्छ हवाइजहाज मोडवा वाइफाइ र मोबाइल डेटा असक्षम गर्न असफल। यसले अनुप्रयोगलाई सामान्य रूपमा प्लेटफर्ममा जानकारी पठाउन रोक्दछ।
वेबमा सञ्चार काट्नु भएपछि, प्रयोगकर्ता जाँच गर्न सक्छ सन्देश कुनै चिन्ता बिना प्राप्त भयो। किनकि त्यहाँ कुनै सम्भावना हुँदैन कि प्रयोगकर्ता जसले यो पठाईएको छ यदि तिनीहरूले इन्स्टाग्राममा सन्देश पढेका छन् भनेर थाहा पाउँदछन्।
पुन: सक्रिय गर्नुहोस्
सन्देश पढिसकेपछि प्रयोगकर्ताले बाहिर निस्किनु पर्छ। पछि, तपाईं अनुप्रयोगबाट र फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ फोन पुनः सक्रिय गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि तपाईले हवाइजहाज मोड निष्क्रिय गर्नुपर्नेछ वा मोबाईल वा वाइफाइ डाटा पुन: जडान गर्नुपर्नेछ।
कसरी इंस्टाग्राममा अधिक अनुयायीहरू छन्?
कसरी इन्स्टाग्राममा एक कहानी पुन: प्रकाशित गर्ने
फेसबुकबाट इन्स्टाग्राममा पोष्ट कसरी गर्ने
कसरी बिना इन्स्टाग्रामबाट सदस्यता समाप्त गर्ने ...
अक्टोबर 25, 2020
इन्स्टाग्राममा कसरी पृष्ठ सिर्जना गर्ने ...
कसरी ईन्टाग्राममा इमोटिकन्स राख्ने ...
एन्ड्रोइडमा इन्स्टाग्राम कसरी स्थापना रद्द गर्ने ...